प्रभु सेलेक्ट फण्डमा लगानीकर्ताकाे उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको छ - Safal Awaj Safal Awaj
प्रभु सेलेक्ट फण्डमा लगानीकर्ताकाे उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको छ
नेपाली पूँजीबजारमा सबैभन्दा ठूलो मर्चेन्ट बैंकिंङ र व्यवसाय विस्तारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने अग्रणी संस्था हो, प्रभु क्यापिटल । संस्थाले हाल व्यवसाय विस्तारकै क्रममा एट टु एट सेवा, ग्राहक सेवा केन्द्र तथा डिपिमा अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरी समग्र मर्चेन्ट बैंकिंङ क्षेत्रमै उदाहरणीय तथा ग्राहकहरुको लागि विश्वासिलो बन्न सफल भएको छ । यसैक्रममा प्रभु क्यापिटलले प्रभु म्युचुअल फण्ड अन्तरगत पहिलो योजना प्रभु सेलेक्ट फण्ड जेठ ५ गतेबाट निष्कासन गरेको छ । निष्कासन शुरु भएको पहिलो दिनमै प्रभु सेलेक्ट फण्डप्रति ग्राहकहरुको उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको छ । म्युचुअल फण्डको वर्तमान अवस्था, यसले पूँजी बजारमा गरेको योगदान तथा प्रभु क्यापिटलले लिएका भावी योजना तथा अहिले निष्कासन गर्न लागिएको प्रभु सेलेक्ट फण्डमा लगानीकर्ताहरुले किन लगानी गर्ने भन्ने विषयमा प्रभु क्यापिटलका प्रमुख संचालन अधिकृत (सिओओ) कृष्ण गिरीसँग सफल आवाजले गरेको वार्ताकाे केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ।
कोभिडको महामारी छ यो बेला तपाईंहरुले कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन एवं नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन पालना गर्दै एक चौथाइ कर्मचारीहरुबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशन ध्यानमा राखी कार्यालयमा प्रत्यक्ष र बाँकी कर्मचारीहरुले घरमा बसेरै अनलाइनबाट काम गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेका छौं । अघिल्लो वर्षको अनुभवले पनि हामीलाई यसप्रति सजग हुन तथा हामीले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता कायम राख्न सजिलो बनाएको छ।
प्रभु क्यापिटलले सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्ट फण्ड निष्कासन गरेको छ यो कस्तो योजना हो ?
यो एउटा बन्दमुखी सामूहिक लगानी योजना हो । यस योजनाअन्तरगत प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ अंकित दरमा १० करोड वटा इकाइको बिक्री गरी १ अर्ब बराबरको रकम संकलन गरी सो रकमको ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गर्ने हाम्रो योजना छ । जेठ ५ बाट निष्कासन शुरु पनि भएको छ र पहिलो दिनमै ग्राहकको उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको छ।
सेलेक्ट फण्डले अन्यत्र लगानी गर्दा कस्तो रणनीति अबलम्बन गर्नुहुन्छ ?
हामीले नेपालको शेयरबजारमा शेयरहरु सूचीकृत भई कारोबारमा रहेका विभिन्न सेक्टरका कम्पनीहरुलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण र छनौट गरी अधिकतम ३० वटा कम्पनी छनौट गर्छौं । त्यसरी छनौट गर्दा विभिन्न आधारहरु जस्तै कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धिदर उच्च रहेको, नियमित रुपमा उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने, वित्तिय अवस्था सवल भएको तथा निश्चित समयअन्तरालमा बजार सूचक भन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने किसिमका शेयरहरु छनौट गर्छौं । यसरी छनौट गरी आएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट ३० कम्पनीहरुको शेयरमा मात्रै लगानी गरी नियमित खरिद बिक्री गर्नेछ । यो फण्डको आगामी दिनमा नेप्सेले जारी गर्ने तयारी गरेको नेप्से ३० नामक इण्डेक्ससँग रिफरेन्स बेन्चमार्कको रुपमा स्थापित हुने विश्वास गरेका छौं।
नेपाली पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था र त्यसमा म्युचुअल फण्डहरुको योगदान कस्तो छ?
हामी अहिलेको नेपाली पूँजीबजारको स्वर्णीम युगमा रहेका छौं । पूँजीबजारको आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था क्रमिक रुपमा हुँदै गएका छन् । केही वर्ष अघिसम्म ओपन क्राउड हुँदै कम्प्युटरमा आधारित कागजी कारोबार प्रणालीमा रहेकोमा अहिले सबै कारोबार डिम्याट भएर अभौतिकरुपमा हुने व्यवस्था भइसकेको छ । यसले स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ । त्यस्तै कारोबार पनि कम्प्युटर प्रणालीबाट सीमित ब्रोकरको घेरामा हुँदै आएकोमा अहिले सबैले अनलाइनबाटै कारोबार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।
बिक्री गरेको शेयरको भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सक्ने तथा खरिद गरेपछिको रकम भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । गएको १ वर्षको अवधिभित्र मात्रै करिब १७ लाख भन्दा बढि डिम्याट खाता वृद्धि भएको छ भने ब्रोकर खाता खोल्ने लगानीकर्ताहरुको संख्या पनि दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गइराखेको छ । यस्तै प्राथमिक निष्कासनमा आउन चाहने कम्पनीहरुलाई दुईवटा विधिबाट प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने बाटाहरु तय गरिएको छ । वास्तविक र केही प्रिमियम सहित प्राथमिक निष्कासनमा आउनको लागि बुक विल्डिङ्ग विधि तय गरिएकाले आगामी दिनमा वास्तविक क्षेत्रमा कार्यरत थप कम्पनीहरु प्राथमिक निष्कासनमा आउने तयारीमा रहेकाछन्।
अलिकति बजारको विकासमा अपुग देखिएको भनेको चैं लगानीका लागि आवश्यक लगानी औजारको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यसतर्फ पनि नियामक निकाय र बजार सञ्चालकहरुले कार्य गरिराखेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तसर्थ हामीले चाँडै नै मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ्ग तथा विभिन्न इण्डेक्स बेष्ड तथा कम्पनी बेष्ड डेरिभेटिभ कारोबारहरु पनि छिटै नै गर्न पाइन्छ होला भन्ने विश्वास छ । अब यी सबैमा सामूहिक लगानी कोषको योगदानको कुरा गर्नुपर्दा सुरुवाती अवस्थामा नेपाली पूँजीबजारमा धेरै रिटेल लगानीकर्ता र केही संस्थागत लगानीकर्ताहरुको मात्रै सहभागिता रहेको हुँदा बजारमा सहभागीको परिपक्वता र बजार प्रति उत्ति सुझबुझ हुन नसकेको साथै बजारमा ससाना बचतहरुलाई संकलन गर्दै साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताहरुको बचतलाई लगानीमा परिणत गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारमा थप अनुभवी संस्थागत लगानीकर्ताहरुको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विधि अनुरुपनै सामूहिक लगानी कोषहरुको प्रवेश भएको हो ।
केही सामूहिक लगानी कोषहरु अलिक कमजोर जस्तो देखिए तापनि अधिकांश सामुहिक लगानी कोषहरुले त्यो उद्देश्य पूरा गरेका छन् । उनीहरुले बजारमा परिपक्व सहभागीको रुपमा जहिले पनि आफूलाई अग्रस्थानमा राख्दै समग्र बजारलाई नै एकहिसावमा दिशानिर्देश गरेको अवस्था पनि थियो विगतमा। तसर्थ सामूहिक लगानी कोषहरुको योगदान नेपाली पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा सराहनीय रहेका छ । उनीहरुले बजार सहभागीहरुबीच परिपक्वता कायम गर्न, पूँजी बजारको विकास र उत्थानमा आफ्नो तर्फबाट सकेको योगदान गर्दै आएको पाइन्छ।
योजनाले इकाइ बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले दक्षतापूर्वक सामूहिक लगानी कोष नियमावलीले तोकेको लगानीका क्षेत्रमा लगानी गरी आवेदकलाई उच्च प्रतिफल दिई धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा समेत एक संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले यस योजनाको इकाइ निष्काशन गरिएको हो।
यसले नेपाल धितोपत्र वोर्डले जारी गरेको सामूहिक लगानी कोष नियमावलीले तोकेको निम्नानुसारका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नेछ।
– सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र
– धितोपत्र बिनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र
-नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुनेगरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, टेजरी विल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु
-बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप
– बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र आदि ।
यसरी लगानी गर्दा फण्डले अधिकतम ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म धितोपत्र विनियम बजार अर्थात नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये ३० वटा कम्पनीहरुमा मात्रै लगानी गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नेछ।
लगानीकर्ताहरुले जग्गामा, सुनमा, वा सूचीकृत शेयरमा पनि त लगानी गर्न सक्छन् ? किन प्रभु सेलेक्ट फण्डमै लगानी गर्ने ?
लगानीकर्ताहरुसँग जोसँग मनग्य लगानीयोग्य रकम छ । पर्याप्त समय दिन सक्नु हुन्छ साथै उहाँहरुलाई कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भनेर पूर्ण ज्ञान छ, त्यस्ता लगानीकर्ताहरुले जग्गामा वा सुनमा वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जुनसुकै कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ । तर लगानी गर्न सक्षमता भएपनि पर्याप्त ज्ञान र समय दिन नसक्ने वा शेयर बजारको उतारचढावबाट हुने जोखिम बहन गर्ने क्षमता कम भएको एवं लगानी गर्न स–सानो बचत परिचालन गर्न चाहने तथा यो बजारमा प्रवेश गर्दै गर्नुभएका गृहिणी, विद्यार्थी तथा अन्य नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरुसँग आजको दिनमा सुनमा वा जग्गामा वा धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोबार गर्न विभिन्न कठिनाई होलान्। तसर्थ प्रभु सेलेक्ट फण्डमा विद्यार्थी, गृहिणी तथा विभिन्न क्षेत्रमा असंगठित रुपमा काम गर्ने, आफूसँग भएको स–सानो बचत लगानीमा रुपान्तरण गर्न चाहने लगानीकर्ताहरुले थोरै जोखिम लिएर उच्च प्रतिफल तथा सुरक्षित लगानीका लागि लगानी गर्न सक्नु हुन्छ । यसले लगानीकर्तहरुसँग छरिएर रहेको स–सानो रकमलाई बचत गर्दै लगानीमा रुपान्तरण गर्न सघाउँछ ।
अन्य सामूहिक लगानी योजनामा भन्दा तपाईंहरुले निष्कासन गर्न लाग्नु भएको प्रभु सेलेक्ट फण्डमा के फरक छ ?
बजारमा धेरैवटा सामूहिक लगानी योजनाहरु सञ्चालनमा छन । तर ती सबै योजना एकअर्कासँग विभिन्न तरिकाले भिन्न छन् । हाम्रो प्रभु सेलेक्ट फण्ड कै कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो फण्डको प्रकृति, यसको संरचना, लगानी रणनीतिका दृष्टिकोणबाट अरुभन्दा भिन्न छौं । हामीले जम्मा ३० वटा कम्पनीहरुमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं । लगानीकर्ताहरुलाई उच्चतम प्रतिफल तथा जोखिम व्यवस्थापनको एउटा नयाँ लगानी औजार का साथै समग्र पूँजी बजारलाई नेप्सेका परिसूचकसँग दाँज्न मिल्ने एउटा बेन्चमार्क यो फण्डले प्रदान गर्नेछ । तपाईंले हेर्नुभयो भने कुनै कुनै सामुहिक लगानी योजनासँग नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमध्ये आधा कम्पनीहरु रहेकाछन् त्यस अर्थमा हामी फरक छौं ।
हाम्रो लगानी रणनीतिका आधारमा पनि अरु भन्दा छौं । तपाईंले बजारमै बुझ्नुभयो भने पनि गएको ९ महिनाको अवधिमा लगानीबाट सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमध्ये क्यापिटलहरु मध्ये रकमका आधारमा मात्र नभई प्रति शेयर आम्दानीका हिसाबले पनि हामी धेरै अगाडि छौं । कसरी त्यस्तो हुन सक्यो भन्दा हाम्रो लगानी रणनीति कै कारणले हो । यसभन्दा अघि बजार डाउनट्रेण्डमै रहेको बखत समेत हामीले बजारमै लगानी गरेर ती लगानीबाट मुनाफा कमाएर प्रतिफल दिएको अनुभव हामीसँग छ । यसका लागि विशिष्टिकृत संरचना तयार गरेका छौं जसमा अनुभवी तथा दक्ष लगानी समिति का साथै लगानी व्यवस्थापन एवं रिसर्च टिमको व्यवस्था गरका छौं । तसर्थ हामीले दक्षता हासिल गरेको पटक पटकको लगानीमा सफलता प्राप्त गरेको लगानी रणनीति अनुरुप नै हामीले यो फण्डलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाढि बढाउँछौं । त्यही भएर नै हामीले ७ वर्षको अवधिमा करिब ३ गुणा सम्म प्रतिफल दिन सक्छौं भनेर प्रक्षेपण गरेका छौं ।
तपाईंहरुको यो योजना ७ वर्षे अवधिको रहेछ । आगामी ५–७ वर्षको नेपाली पूँजी बजारको अवस्था कस्तो देख्नुभएकाे छ ?
अबको ७ वर्षे अवधि नेपाली पूँजी बजारको लागि एकदमै उज्वल रहने हाम्रो विश्वास छ । यो बीचमा पूँजीबजारमा लगानी औजार थप हुने छन् । कारोबार गर्ने मेकानिजममा विस्तार हुनेछ । बजारमा थप संस्थागत लगानीकर्ताहरुसँगै खुद्रा लगानीकर्ताहरुको प्रवेश हुनेक्रम जारी छ । भर्खरै स्टक डिलरको प्रवेश भएको छ । यस्ता डिलरहरु अझै थप हुँदै जानेछन् । क्लोज इण्डेडका साथै ओपन इण्डेड फण्डहरु एवं विशिष्टिकृत लगानी कोषहरुको संख्या बढेर जानेछ । जसले बजारमा थप माग तथा आपूर्तिको व्यवस्थालाई टेवा प्रदान गर्नेछन्।
एनआरएन तथा वैदेशिक लगानीलाई पूँजीबजारमा प्रवेशको लागि मार्गप्रशस्त भएर तिनीहरुको प्रवेश हुनेछ । तसर्थ समग्रमा आगामी ५–७ वर्षमा हामीले पूँजीबजारमा थप विकासहरु देख्न पाउनेछौं र यही बीचमा अहिले जारी बुलको अवधि अर्को चुनावसम्मको लागि निरन्तर रहनेछ । हाम्रो फण्डले कम्तिमा ७ वर्षको दौरानमा अहिलेको बुलका साथै अर्को एउटा बुल समेत पाउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । तसर्थ लगानीकर्ताहरु पूँजीबजार प्रति दिर्घकालिन रुपमा ढुक्क भएर हाम्रो फण्डमा लगानी गर्न सक्नु हुनेछ ।
यो फण्डमा लगानी गर्ने युनिटहोल्डरले कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सक्दछन् ?
हामीले यस फण्डका युनिट होल्डरहरुलाई वार्षिक औषतमा २० प्रतिशतको प्रतिफल प्रदान गर्छौं भनेर प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसैगरी निरन्तर ७ वर्षसम्म लगानी गर्ने युनिटहोल्डरले म्याचुरिटि अवधिसम्म करिब ३ गुणा सम्म प्रतिफल पाउनुहुनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेका छौं ।
यस अर्थमा फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्नुहुने लगानीकर्ताहरु जो निश्चित प्रतिफलको लागि बैंकमा पैशा राखेर बस्नु भएको छ । उहाँहरुको लागि यो एकदमै राम्रो लगानी क्षेत्र हो । यसको निष्कासन पश्चात यसलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिने भएको हुँदा उहाँहरुले जति बेला चाह्यो बजारमा बिक्री गरेर पैशा निकाल्न सक्नुहुनेछ । त्यसैले जोखिम कम रुचाउनुहुने, चाहेको बेला आफ्नो लगानी झिक्न चाहने तथा आफूसँग भएको बचतलाई लगानीमा परिणत गर्न चाहनुहुनेहरुले हाम्रो फण्डको आइपिओमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ ।
बजारमा पहिले आएका सामूहिक लगानी योजनाले गरेका क्रियाकलापबाट लगानीकर्ताहरु एकदमै निराश भएका उदाहरण पनि छन, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुकाे यो योजनाले युनिट होल्डरलाई कसरी त्याे प्रतिफल दिनुहुन्छ ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा सामूहिक लगानी कोषलाई काम गर त भनियो तर हातखुट्टा बाँधेर । एउटा निश्चित परिधिमा बसेर काम गर्नुपर्दा सुरु सुरुमा केही सामुहिक लगानी योजनाहरुले युनिट होल्डरको अपेक्षा अनुरुप प्रदर्शन गर्न नसकेकाले त्यस्तो भएको हो । हामीकहाँ इन्ट्रा डे, सर्ट सेल जस्ता फिचरहरु छैनन्। बजारमा किनेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ । त्यसमाथि निश्चित तहभन्दा बढी नगद लिएर बजार कुर्दै बस्न पनि पाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा बजार घट्दो अवस्थामा रहेको बेला खरिद गरी बसेका केही सामूहिक लगानी योजनामा त्यस्तो भएपनि ढिलो चाँडो ति सबैले प्रतिफल दिएका नै छन् । र, त्यसमा नियामक निकायले अलिक दायरा खुला गरी औजारहरुमा विस्तार गरिदिने हो भने सामूहिक लगानी कोषको आइपिओमा युनिट किन्दा पनि घाटा हुन्थ्यो रे भन्ने चै अबका दिनमा इतिहास हुने दिन टाढा छैन ।
त्यसैले हामी हाम्रा आदरणीय युनिट होल्डर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुलाई भन्न चाहन्छौं– निर्धक्क भएर सामूहिक लगानी कोषको आइपिओमा लगानी गर्नुहोस् । प्रभु सेलेक्ट फण्डले अहिलेसम्म तपाईंहरुले अपेक्षा र अनुभव गरेको भन्दा उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता गर्दछ । यसमा निश्चिन्त भई लगानी गर्नु होस् । हामीले अहिलेकैं संरचनामा पनि उच्च प्रतिफलको प्रतिबद्धता गरेका छौं । अझ त्यसमा थप वित्तिय औजार र कारोबार संरचना भएमा त्यो प्रतिफल अझ वृद्धि भएर जानेछ र हामी त्यसको नजिकै छौं ।
के कुराले लगानीकर्ताहरुलाई यो फण्डमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ला त ?
मुख्यतः हामीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास नै हो, जसले उहाँहरुलाई यो फण्डमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दछ । त्यसपछि हामीले प्रतिबद्धता गरेको प्रतिफल पनि हो । यो हाम्रो पहिलो फण्ड हो तसर्थ हाम्रो लगानी अनुभवको फाइदा युनिटबाट लिन लगानीकर्ताहरुले हाम्रो फण्डमा लगानी गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास रहेको छ।